राम्रो आश्चर्य को एक एक पूर्ण फरक जीवन राम्रो चाहने को मिथक ल्याउँछ कि एक जादुई खेल छ. Thunderkick देखि अपेक्षित छ रूपमा, यो स्लट फोन क्यासिनो खेल बिल्कुल मा हेर्न अभूतपूर्व छ र गेमप्लेको पनि शानदार र अद्वितीय छ.
आश्चर्य को राम्रो को विकासकर्ता बारेमा
Thunderkick पहिले नै यसको उपस्थिति बनाएको छ कि एक अप र आ कम्पनी उत्पादन केही धेरै अद्वितीय र नेत्रहीन आकर्षक क्यासिनो सफ्टवेयर द्वारा अनलाइन खेल उद्योग मा महसुस छ. यो स्लट फोन क्यासिनो खेल एक यस्तो खेल Thunderkick विकास छ (NYX).
यो मा असामान्य छ कि पहिलो कुरा स्लट फोन क्यासिनो खेल कुनै पनि रील वा paylines को अभाव छ, राम्रो कम्तिमा सामान्य तरिका. तपाईं जंगल मा गहिरो हुन हुन्छ जो स्क्रिनको बीचमा एक देख्नुभएको, रूखहरू केही विशाल घेरिएको stemmed. राम्रो तरिकाले कुनै साधारण राम्रो छ तर जादुई गुणहरू संग यो प्रतीक गहिरो भित्रबाट बाहिर spews रूपमा. तपाईं एक विजेता संयोजन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईंले कम्तिमा तीन मिल्दो प्रतीक प्राप्त गर्न आवश्यक छ. यो रूपमा रूपमा सरल छ. अन्य कुनै नियम यहाँ हुन्छ. There are nine different stones in this स्लट फोन क्यासिनो जंगली सहित खेल. उच्चतम तिर्ने आधारभूत प्रतीक रातो रंग मा एक मणि छ. Multipliers पनि राम्रो आधार मा छरिएका खरानी पत्थर मा carved छन्.
निम्नानुसार यो स्लट को अन्य सुविधाहरू छन्:
Multipliers- तपाईं विजेता Combos बनाउन तीन वा बढी मिल्दो प्रतीक प्राप्त गर्न आवश्यक. को समान प्रतीक सजिलो तपाईंले तिनीहरूलाई चिन्न लागि बनाउन चमक हुनेछ. को विजेता संयोजन बाहिर भुक्तानी छ चाँडै पछि चमकिलो प्रतीक केही नयाँ प्रतीक तपाईंलाई विजेता बढी संभावना दिन प्रतिस्थापित गर्दै. All these recurring wins will get increasing multipliers up to 32x.
परी विशेषता- तपाईं एक हारी स्पिन थियो गरेपछि कहिलेकाहीं तपाईं स्क्रिनमा एक उपस्थिति बनाउन एक सानो परी हेर्न. यस परी स्क्रिन सबै एकल प्रतीक गायब गर्नेछ. नयाँ प्रतीक राम्रो भित्रबाट प्रकट र एक जीत स्कोरिङ को दोस्रो मौका दिएर गायब प्रतीक को हुनेछ. यस परी पनि गर्न गुणक अप वृद्धि हुनेछ 32 प्रत्येक respin संग पटक.
राम्रो आश्चर्य को बिल्कुल मा हेर्न अचम्मको छ र राम्रो तरिकाले तपाईं इनाम बारम्बार WINS संग जो धेरै नवीन स्लट छ. यो स्लट फोन क्यासिनो खेलको बारेमा एक प्रभावशाली RTP आउँछ 96.5%.